ဘဝမှာ အလုပ်နဲ့ငွေထက် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ ကြည်သာဟန်
1 Jun 2017 . 10:20 AM
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေ အများကြီးရှိသူ ၊ လူငယ်ဘဝမှာပဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကြည်သာဟန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် စွန့်လွှတ် ရုန်းကန် ကြိုးစားခဲ့ရပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝခံယူချက်တွေအကြောင်းကို အခုလိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအနေအထားအပေါ်ခံယူချက်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝပုံစံ
လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်က ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း KL Seven Car Sales Center ကိုတည်ထောင်ထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော့်ကို အားပေးသူတွေ အတော်အသင့်ရှိပါတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့်ပါပီလေးတွေကိုရောခင်မင်ကြပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအပေါ် ခံယူချက်အနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အောင်မြင်တယ်လို့ မဆိုချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်နဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက် စွန့်လွှတ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်တွေဆိုရင် အမှတ်မီရဲ့သားနဲ့ မတက်ခဲ့ရဘူး။ ပညာရေးကိုအဝေးသင်ပညာရေးဘဝနဲ့ပဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူငယ်ဘဝအချိန်တွေအများစုကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ သူများတွေကလူငယ်သဘာဝသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားလာကြမယ်။ ခရီးတွေအတူထွက်ကြမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီရဲ့ Lifestyle မရှိခဲ့ဘူး။ အဲလိုသူများတွေသွားလာနေချိန်မှာ ကိုယ်က အဝေးသင်ပဲတက်ပြီး ကြီးပွားရေးအတွက်ပဲသူများတွေဆီမှာ ပညာသင်ဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။
စီးပွားရေးနယ်ပယ်ဆိုတာကိုပြောရရင် ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး ကားလောကထဲကိုခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကကိုယ့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံဆိုတာမရှိသေးတဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကားကိုဝယ်ရောင်းလုပ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကားပွဲစားတွေ ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလိုက်လေ့လာတယ်။ ကိုယ့်အသိတွေကားဝယ်တဲ့အခါလိုက်ကြည့်ပေးတယ်။ အဲဒီကရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်လေးတွေကို စုစုထားပြီး ကျွန်တော်အသက် ၂၁ နှစ်လောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကားစဝယ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကနေစပြီး ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲပြောမလား ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ရောင်းပဲပြောမလား စလုပ်ဖြစ်တာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုတွေကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ တစ်ခုလိုချင်ရင်တစ်ခုတော့ စွန့်လွှတ်ရတာပါပဲ။ မိဘတွေကလည်းကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ ကျွန်တော်က လူငယ်ဘဝကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ အပျော်အပါးတွေလျှော့ခဲ့ရတယ်။ လူငယ်ကျောင်းသားဘဝကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ ကြိုးစားတယ်
အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင် ဒါမျိုးအောင်မြင်ရမယ် ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတော့မထားထားဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်။ ကြိုးစားမှုရဲ့အပေါ်ဖြစ်လာသမျှကိုလည်း လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ ကိုယ်မှန်းတာထက်ပိုပြီးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ရင်လည်း အဲဒီအခြေအနေနဲ့ရပ်မနေဘူး။ ထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်။ ကိုယ်မှန်းသလောက်ဖြစ်မလာခဲ့ရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျသွားဘူး။ အမှန်တော့ ကျွန်တော့်ဘဝမှာအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကားဈေးအတက်အကျကြောင့် စီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံဖူးတာပါပဲ။ ဒါတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဘဲ ကြိုးစားခဲ့လို့ခုလိုနေရာတစ်နေရာ ရလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဒီခေတ်လူငယ်တွေက ကံကောင်းပါတယ်။ Social Network ခေတ်စားလာတော့ ကမ္ဘာကျော်သူဌေးကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ ၊ ကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ နည်းနာတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာကြည့်ရုံနဲ့သိရတယ်။ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး အကြောင်းအရာတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သိရတယ်။ အရင်ကဆို သီးသန့်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလေ့လာမှရတာ။ ဒီခေတ်မှာက ပညာရှာဖို့လည်းလွယ်တယ်။ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေလည်းပေါတယ်လေ။ သူတို့တွေက အရင်ခေတ်ကလူတွေထက်ဗဟုသုတလည်းပိုကြွယ်တော့ ပညာရေးကိုလည်းပိုဦးစားပေးလာတယ်။ ပြီးတော့ တချို့တွေဆို လူငယ်ပေမယ့်အတွေးအခေါ်လေးတွေကောင်းတယ်။ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေရှိတာတွေ့ရတာမို့ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျတယ်။
ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာ
ဘဝမှာ ဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို အဓိကထားပါတယ်။ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီး စိတ်မချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်သည်စက်ရုပ်လိုပဲဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာမှစိတ်ကျေနပ်စရာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ငွေပဲရှိပြီး စိတ်မချမ်းသာရဘူးဆိုရင် ပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲ အဓိကထားတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ခုချိန်ထိကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ ပြီးတော့ တစ်ခုရှိတာက ဘယ်အနေအထားရောက်မှ ဘယ်နေရာရောက်မှ အများအကျိုးကို ဇောက်ချလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ လှူစရာရှိတာလှူတယ်။ ပရဟိတတွေလုပ်တယ်။ အဲဒီလို အများကိုကူညီရတာ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ခံစားရတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ချမ်းသာမှုလေးကို အဓိကထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ကဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လို့ စိတ်အရမ်းမွန်းကျပ်နေရမယ် စိတ်ပင်ပန်းနေရမယ်ဆိုရင် အဲဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းကျိုးရှိတယ် ၊ အများအတွက်လည်း မဆုတ်ယုတ်ဘူးဆိုမှ လုပ်တယ်။ တကယ်တော့ ဘဝမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုက အဓိကပါ။ ငွေဆိုတာက အဝေးကြီးမှာပါ။
အှနျလိုငျးပျေါမှာ သူ့ကိုခဈြခငျသူတှေ အမြားကွီးရှိသူ ၊ လူငယျဘဝမှာပဲ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျ ခိုငျခိုငျမာမာရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးစားနိုငျခဲ့သူ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ကွညျသာဟနျရဲ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ စှနျ့လှတျ ရုနျးကနျ ကွိုးစားခဲ့ရပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝခံယူခကျြတှအေကွောငျးကို အခုလိုဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိအနအေထားအပျေါခံယူခကျြနဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ ဘဝပုံစံ
လကျရှိမှာ ကြှနျတျောက ကိုယျပိုငျလုပျငနျး KL Seven Car Sales Center ကိုတညျထောငျထားပါတယျ။ အှနျလိုငျးမှာလညျး ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးသူတှေ အတျောအသငျ့ရှိပါတယျပေါ့။ ကြှနျတျောရော ကြှနျတေျာ့ပါပီလေးတှကေိုရောခငျမငျကွပါတယျ။ လကျရှိအနအေထားအပျေါ ခံယူခကျြအနနေဲ့ပွောရရငျ ကြှနျတျောကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအောငျမွငျတယျလို့ မဆိုခငျြပါဘူး။ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနိုငျနတေယျဆိုတဲ့အနအေထားမှာပဲရှိပါတယျ။ ငယျငယျနဲ့ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနိုငျအောငျကွိုးစားတဲ့အတှကျ စှနျ့လှတျရတာတှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးတက်ကသိုလျတှဆေိုရငျ အမှတျမီရဲ့သားနဲ့ မတကျခဲ့ရဘူး။ ပညာရေးကိုအဝေးသငျပညာရေးဘဝနဲ့ပဲဖွတျသနျးခဲ့ရတယျ။ နောကျပွီးတော့ လူငယျဘဝအခြိနျတှအေမြားစုကို စှနျ့လှတျခဲ့ရတယျ။ သူမြားတှကေလူငယျသဘာဝသူငယျခငျြးတှနေဲ့သှားလာကွမယျ။ ခရီးတှအေတူထှကျကွမယျပေါ့။ ကြှနျတေျာ့မှာ အဲဒီရဲ့ Lifestyle မရှိခဲ့ဘူး။ အဲလိုသူမြားတှသှေားလာနခြေိနျမှာ ကိုယျက အဝေးသငျပဲတကျပွီး ကွီးပှားရေးအတှကျပဲသူမြားတှဆေီမှာ ပညာသငျဘဝနဲ့ဖွတျသနျးခဲ့တယျ။
စီးပှားရေးနယျပယျဆိုတာကိုပွောရရငျ ကြှနျတျောက ဆယျတနျးအောငျပွီးတဲ့အခြိနျကစပွီး ကားလောကထဲကိုခွစေုံပဈဝငျခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျကကိုယျ့မှာ ကိုယျပိုငျပိုကျဆံဆိုတာမရှိသေးတဲ့အတှကျ ကိုယျပိုငျကားကိုဝယျရောငျးလုပျရတာတော့မဟုတျဘူး။ ကားပှဲစားတှေ ကားဝယျရောငျးလုပျတဲ့နရောမှာလိုကျလလေ့ာတယျ။ ကိုယျ့အသိတှကေားဝယျတဲ့အခါလိုကျကွညျ့ပေးတယျ။ အဲဒီကရလာတဲ့အကြိုးအမွတျလေးတှကေို စုစုထားပွီး ကြှနျတျောအသကျ ၂၁ နှဈလောကျမှာ ကိုယျပိုငျကားစဝယျဖွဈတယျ။ အဲဒီကနစေပွီး ဘဝမှာ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးပဲပွောမလား ကိုယျပိုငျဝယျရောငျးပဲပွောမလား စလုပျဖွဈတာပါ။ လကျရှိမှာတော့ ကြှနျတျောဟာကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနိုငျတဲ့အနအေထားလေးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျနိုငျအောငျ ဘယျလိုတှကွေိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ တဈခုလိုခငျြရငျတဈခုတော့ စှနျ့လှတျရတာပါပဲ။ မိဘတှကေလညျးကိုယျ့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့အနအေထားမရှိတော့ ကြှနျတျောက လူငယျဘဝကိုစှနျ့လှတျခဲ့ရတယျ။ အပြျောအပါးတှလြှေော့ခဲ့ရတယျ။ လူငယျကြောငျးသားဘဝကိုစှနျ့လှတျခဲ့ရပါတယျ။
အလုပျတဈခုကို ဒီလိုစိတျတှနေဲ့ ကွိုးစားတယျ
အခြိနျကာလတဈခုရောကျရငျ ဒါမြိုးအောငျမွငျရမယျ ဒါမြိုးဖွဈရမယျဆိုတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတော့မထားထားဘူး။ အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားတယျ။ ကွိုးစားမှုရဲ့အပျေါဖွဈလာသမြှကိုလညျး လကျခံနိုငျအောငျကွိုးစားတယျ။ ကိုယျမှနျးတာထကျပိုပွီးဖွဈထှနျးလာခဲ့ရငျလညျး အဲဒီအခွအေနနေဲ့ရပျမနဘေူး။ ထပျပွီးကွိုးစားတယျ။ ကိုယျမှနျးသလောကျဖွဈမလာခဲ့ရငျလညျး စိတျဓာတျမကသြှားဘူး။ အမှနျတော့ ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာအမြားကွီးဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကားဈေးအတကျအကကြွောငျ့ စီးပှားရေးအခွအေနပွေောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ ဆုံးရှုံးမှုတှကွေုံဖူးတာပါပဲ။ ဒါတှကွေောငျ့ စိတျဓာတျကမြသှားဘဲ ကွိုးစားခဲ့လို့ခုလိုနရောတဈနရော ရလာတယျလို့မွငျပါတယျ။
ဒီခတျေလူငယျတှကေ ကံကောငျးပါတယျ။ Social Network ခတျေစားလာတော့ ကမ်ဘာကြျောသူဌေးကွီးတှရေဲ့ အဆိုအမိနျ့တှေ ၊ ကမ်ဘာကြျောလုပျငနျးရှငျကွီးတှရေဲ့ နညျးနာတှကေို ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာကွညျ့ရုံနဲ့သိရတယျ။ စီးပှားရေး ၊ လူမှုရေး အကွောငျးအရာတှကေို အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ သိရတယျ။ အရငျကဆို သီးသနျ့စာအုပျတှဖေတျပွီးလလေ့ာမှရတာ။ ဒီခတျေမှာက ပညာရှာဖို့လညျးလှယျတယျ။ အထောကျအကူပွုပစ်စညျးတှလေညျးပေါတယျလေ။ သူတို့တှကေ အရငျခတျေကလူတှထေကျဗဟုသုတလညျးပိုကွှယျတော့ ပညာရေးကိုလညျးပိုဦးစားပေးလာတယျ။ ပွီးတော့ တခြို့တှဆေို လူငယျပမေယျ့အတှေးအချေါလေးတှကေောငျးတယျ။ ကွိုးစားခငျြစိတျတှရှေိတာတှရေ့တာမို့ ကြှနျတျောကတော့ သဘောကတြယျ။
ဘဝမှာ အရေးအကွီးဆုံးလို့ သတျမှတျထားတဲ့အရာ
ဘဝမှာ ဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုရငျ စိတျခမျြးသာမှုကို အဓိကထားပါတယျ။ အလုပျတှအေမြားကွီးလုပျပွီး စိတျမခမျြးသာလို့ရှိရငျလညျး ကြှနျတျောသညျစကျရုပျလိုပဲဖွဈနမှောပါ။ ဘာမှစိတျကနြေပျစရာရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ငှပေဲရှိပွီး စိတျမခမျြးသာရဘူးဆိုရငျ ပြျောရှငျရမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ စိတျခမျြးသာမှုကိုပဲ အဓိကထားတယျ။ ကြှနျတျောဟာ ခုခြိနျထိကွိုးစားနရေတုနျးပါ။ ပွီးတော့ တဈခုရှိတာက ဘယျအနအေထားရောကျမှ ဘယျနရောရောကျမှ အမြားအကြိုးကို ဇောကျခလြုပျမယျဆိုတာမြိုးလုံးဝမရှိဘူး။ တတျနိုငျသမြှ လှူစရာရှိတာလှူတယျ။ ပရဟိတတှလေုပျတယျ။ အဲဒီလို အမြားကိုကူညီရတာ စိတျခမျြးသာမှုကို ခံစားရတယျ။ အဲဒီလို စိတျခမျြးသာမှုလေးကို အဓိကထားပါတယျ။ ပွီးတော့ အလုပျကဒုတိယနရောမှာရှိပါတယျ။ အလုပျတဈခုကိုလုပျလို့ စိတျအရမျးမှနျးကပျြနရေမယျ စိတျပငျပနျးနရေမယျဆိုရငျ အဲဒီအလုပျကိုကြှနျတျောမရှေးတော့ဘူး။ ကိုယျ့အတှကျလညျးကောငျးကြိုးရှိတယျ ၊ အမြားအတှကျလညျး မဆုတျယုတျဘူးဆိုမှ လုပျတယျ။ တကယျတော့ ဘဝမှာ စိတျခမျြးသာမှုက အဓိကပါ။ ငှဆေိုတာက အဝေးကွီးမှာပါ။
by yoelu .5days ago
Plastic Breakdown Program လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးများ
by Kyaw Soe Aung .3weeks ago
ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုရှာပြီး ဘယ်မှာသုံးလိုက်တာလဲ Cristiano Ronaldo
ဒေါ်လာ ၂၇၀ သာ ကျသင့်မယ့် Xiaomi ရဲ့ Mi Pad4Tablet
by 2B .3weeks ago
အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့ လက်သုံးကား The Beast (Cadillac One)
ပြည်ပက အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဆင်တူသလို ရှိနေတဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်များ